I-Chalet enemifanekiso phakathi kweDolomites - I-Airbnb
I-Chalet enemifanekiso phakathi kweDolomites
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMargot
Indawo eyayisakuba yi-hay loft ilungisiwe kwaye yakha ngothando ngokutsha yaba yi-chalet enqabileyo kunye ne-rustic. Ngemibono yepanoramic yeentaba zeLatemar kunye neCatinaccio ingasese kwaye yabucala kodwa ifikeleleka ngokuthe ngqo ngemoto. Kukho indawo yokupaka yabucala kwisiza kwaye indawo yokungena iyafikeleleka ngenqwelomoya emfutshane yezinyuko. Yakhelwe ngaphezulu kweevenkile ezintathu le chalet iyakwazi ukuzimela ngegumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elikumgangatho ophantsi kunye namagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela elongezelelweyo phezulu kunye negumbi elingaphantsi.
Kwintliziyo yendawo engasemva yeDolomites i-chalet yenza indawo efanelekileyo yokubuyela ehlotyeni. Relax kwaye uphumle kwipropathi enkulu ejikelezwe yimithi emihle emidala okanye usebenze kwaye ujonge ubuhle beCarezza kunye nendawo eyingqongileyo.
Kukho izinto ezininzi ezinomtsalane ezijikeleze njengebala legalufa elinemingxuma eli-9 elilungele onke amanqanaba kwimizuzu emi-3 kuphela umgama wokuqhuba okanye ukukhwela ihashe ngaphakathi kwemizuzu emi-2 yokuqhuba kunye nothungelwano olukhulu lokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile entabeni. Siyavuya kakhulu ukunika iingcebiso kunye neengcebiso zangaphakathi.
I-Grand Hotel Carezza, kwimizuzu emi-5 umgama wokuqhuba, ibonelela ngeenkundla zentenetya kunye nephuli yokuqubha yangaphakathi. Ibekwe kanye ecaleni kwayo yimakethi encinci yokuthenga igrosari.
Ukuba awuziva uthanda ukupheka kukho iindawo zokutyela ezininzi ukusuka kwi-gourmet ukuya kwi-rustic apho unokungcamla izinto ezikhethekileyo zasekhaya.
Lo mhlaba umi kumhlaba omangalisayo weDolomites eyindawo yeLifa leMveli yeHlabathi ye-UNESCO. Uya kukwazi ukuyonwabela iCima del Catinaccio eyaziwa kakhulu ngeAlpenglow kunye nentsomi kaKumkani uLaurin kunye negadi yakhe. Kwakhona olufanele uhambo yiLago di Carezza ebukekayo apho unokuhamba ngeendlela zeNkosazana uSissy. Kungenjalo ungabhadulela ngakumbi kwiFiemme Valley okanye iVal d'Ega ekufutshane, ngokhetho oluninzi uya kuba nakho ukonwabela iintaba ngoxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Margot
Sibekwe kufutshane kwaye ngaphezulu kokonwaba ukwabelana ngeengcebiso zobuqu kunye neengcebiso zokuqinisekisa ukuba unokuhlala kamnandi, nangona kunjalo sikunika isithuba ukuba uzonwabele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nova Levante